--Lọ - Coolordrool
Ozugbo m dị jụụ, ugbu a m dị…
Nwa Kọfị Nwụrụ Anwụ Nwụrụ Anwụ
Ihe ngosi ohuru nke Lil Elfie
2 izu gara aga igwekota
Igha n'okporo Streetzọ
Ọhụrụ Camo Lil Elfie
2 ọnwa gara aga igwekota
Ọhụụ sitere na Lil Elfie
3 ọnwa gara aga igwekota
Blog nke Mbụ Coolordrool!
7 ọnwa gara aga igwekota
Obi di anyi uto na anyi choputara Coolordrool!
May nwere ike ịchọta anyị site na Facebook na otu n'ime akaụntụ nke na-arụtụ aka (dịka ọmụmaatụ, Facebook.com/Coolordrool, Facebook.com/SkinniKat, Facebook.com/Reallilelfie, ma ọ bụ Facebook.com/DeadGirlCoffee).
Ka osi di, Coolordrool malitere na Mee 2019. Yabụ na anyị dị ọhụụ.
Nke a na - abụkarị weebụsaịtị ntụrụndụ ka anyị na - ewetara Animations sitere n'aka ndị omenkà dị iche iche.
Nke ahụ abụghị ihe niile!
Anyị bụkwa ebe naanị maka Igha n'okporo Streetzọ ngwaahịa, uwe site na Skinni Kat, Lil Elfie na Nwa Kọfị Nwụrụ Anwụ Nwụrụ Anwụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta Skinni Kat, Lil Elfie ma ọ bụ Nwụrụ Ahịa nwanyị Kọfị Nwụrụ Anwụ, dị ka T-shirts, hoodies na ụdị ndị a - y’okporo okporo ụzọ anyị - biko pịa na ngwaahịa jikọta na menu.
Dị njikere pịa 'Ibu Ibu More'bulie ihe oyiyi niile!
Ọ ga-eduga gị na katalọgụ ngwaahịa ahụ Shopify maka ndenye ọpụpụ.
Anyị nwere ike ibubata uwe mara mma nke ukwuu n’ebe ọ bụla n’ụwa ma ebe mgbakwasị ụkwụ maka uwe bụ Los Angeles, California, USA.
Nke a bụ ihe anyị enweghị ike igosipụta na Ndepụta Ngwaahịa, nke ahụ bụ mgbakwunye 'somethings' anyị nke na-eke ụdịrị anyị iche ma nwee ike ime ka ị jụkwuo oyi.
Mkpado anyị bụ aha mkpado, na anyị Nwa Kitten na-efe efe site na Coolordrool, sewn na ngwaahịa ọ bụla (ma Lil Elfie, Skinni Kat, Nwụrụ anwụ Girl kọfị…) anyị na-ebugharị (ọ na-abụkarị na aka ekpe, aka ekpe).
Kitten Black Flying a dịkwa na Tag (nke ahụ na-akpasu iwe dị n'ime uwe ahụ na-enye ozi gbasara onye mere ya). Mara mma, jụụ?
Lee ihe onyonyo nke ihe anyi putara:
Kedu ihe ọzọ?
Anyị na-agbakwunye ịgbakwunye ozi ọhụrụ, nka, egwu na vidiyo dịka anyị nwere ike. Ọ bụrụ n ’ị dị ka ya, ị nwere ike ịnye echiche gị maka ihe (“ think chere nke a ma ọ bụ nke a bụ Cool, Meh, ma ọ bụ Drool? ”).
Anyị nwekwara njikọ na-efu Arcade egwuregwu vidiyo.
Enwere ihe ndi ozo anyi tinye tinye ebe anyi nwere ike.
Anyị nwere sistemụ 'rudimentary' nke ahaziri iji kwụọ gị ụgwọ maka ịnọ ebe a, ịtụ vootu ihe, wdg Ọ bụ nke anyị Nkwụghachi ụgwọ Colordrool sistemụ. Ozugbo ọ dị mma, ọ ga-agbako ikere òkè gị, ị ga-enweta ego, mkpụrụ ego, nbelata ego site na ndị mgbere. Dị ka a Co-op? Ọ bụ ngalaba-op.
Yabụ, nọrọ nụ ma gwa ndị enyi gị.
Iji mee nke ahụ, anyị nwere njikọ Social Media anyị (Ndị otu, Onye ọrụ). Ọ bụrụ na ịdebanye aha, ị ga - ahụ ego mbụ ga - abịa n'ụzọ gị! (Nke ahụ bụ na akaụntụ gị.)
Ndị otu egwuregwu
Edebere ikike © Ikike niile echekwabara.
Na-ebugharị ụgbọ ⌛️ ...